Badeecada alaab ka timid Ruushka
֏ Dammaanadaha Ermeniga
Br Rugta Belarusiyaanka ah
BGN Lion Bulgarian
R $ Dhabta ah ee reer Brazil
Ft Calaamadaha Hungarian
Kr Krone deenishka
₸ Kazakhstan waa dharbaaxo
Laga soo bilaabo $ Dollarka Kanada
Boqorradii Kyrgyz som
zł Zloty Polish
Ron Romaan Leu
TJS Somali Somoni
TMT Manatanka Turkiga
UZS Xusuusta Uzbek
₴ Hryvnia Ukrainian
SEK Qalabka Swedishka
₣ Faransiiska Swiss
Chinese (La fududeeyay)
Soo saarista Ruushka
Adeegga Apteka.Social wuxuu bixiyaa adeegyo iibsashada iyo keenista alaabooyinka caafimaadka iyo ma aha oo keliya farmashiyeyaasha Ruushka iyo dukaamada. Bixinta alaab kasta oo loo isticmaalo isticmaalka shakhsiga ah ee Russia. Iibsiyada waxaa lagu sameeyaa oo kaliya farmasiyada rasmiga ah iyo dukaamada internetka, iyo sidoo kale si toos ah uga soo iibsadaha. Gaadiidka waxaa sameeya shirkado gaadiid oo ka socda Zurich, Hong Kong. Adeegyada macaamiisha dhexdhexaadka ah. Iibsiga waxaa sameeya shirkad Swiss ah oo shati u leh iibinta mukhaadaraadka adduunka oo idil.
Waxaad hubsan kartaa tayada Ruush ee daawooyinka la soo jeediyey iyo fitamiinada.
Gaadiid degdeg ah:
Bixinta aan degdegga ahayn - horay ugu jirtay qiimaha alaabta.
Gaadiidka caalamka oo dhan laga soo bilaabo 12 ilaa saacadaha 48 laga soo bilaabo taariikhda iibsiga. Shakhsi ahaan loo xisaabiyaa, iyadoo ku xiran meesha aad ku socotid.
1. Tirada badeecadaha isticmaalka shakhsiga oo keliya (aan ka badnayn baakadaha 5 ee hal magac)
2. Ka digtoonow xeerarka dhaqanka iyo xaddidaadda wadankaaga, haddii qashinku uusan ku dhaafin caadooyinka, waa la soo celiyaa, waana laguu celinayaa.
Bixinta Yurub. Ku soo dirida baakadaha ka imaanaya Zurich, Berlin iyo Milan.
Bixinta wadamada Aasiya, Australia, New Zealand: Waraaqaha ka soo diraya Hong Kong.
Bixinta Mareykanka iyo Kanada. Maraykanka oo ka soo diraya New York.
Bixinta Afrika, Koonfurta Ameerika, Mexico oo ay sameeyeen EMS.
Adigoo adeegsanaya adeega Apteka.Social, waxaad dalban kartaa alaabta farmashiyada ee Russia. Marka lagu daro qaddiyadaha la soo jeediyey, waxaad ku amri kartaa waxyaabo kale oo la xiriira isticmaalka shakhsiyeed ee aan laga iibsan karin dalkaaga.
Aan la keenin: alaabo ay ku jiraan maadooyinka mamnuucida soo dajinta sharciyada dalkaaga. Ka hor intaanad dalban, hubi sharciyada caadada ee dalkaaga. Bixinta shixnad aad u culus iyo boorsooyin ka culus 1kg. tixgelin dheeraad ah.
Haddii aanad helin badeecada aad u baahan tahay, waxaa laga yaabaa inaanay ku jirin liiskayaga, waxaan u diri karnaa isku-duubis dukaanka kale ee adduunka ah waxaanan xisaabin doonnaa geeyta cinwaankaaga.
Haddii aad qabtid su'aalo dheeraad ah ama aad hayso qorshe wadashaqayn, u qor info@apteka.social
Halkan waa daabacaad ka mid ah waxyaabaha ka soo baxa Ruushka
Taageero loogu talagalay 24 / 7
Si aad u dalbato alaab aad u baahan tahay, waxaad isticmaali kartaa foomka codsiga
Bixinta alaab ka timid Ruushka loogu talagalay isticmaalka shakhsiga oo keliya.
Sida loo iibsado?
Waxaad iibsan kartaa oo kaliya farmashiyada rasmiga ah ee Russia.
Catalog of alaabta ka soo Russia
Ku iibinta farmasiyada Ruushka iyo dukaamada.
© 2017-2019. Alaabta caafimaad ee laga helo Ruushka Apteka.social